Munaasabad Loogu Dabaal Dagayay Sanad Guurada 4aad ee ka soo Wareegtay Dhagax dhigii biyo xidheenka abay oo si balaadhan uga dhacday maanta Xarunta Deegaanka ee Jigjiga - Cakaara News
Munaasabad Loogu Dabaal Dagayay Sanad Guurada 4aad ee ka soo Wareegtay Dhagax dhigii biyo xidheenka abay oo si balaadhan uga dhacday maanta Xarunta Deegaanka ee Jigjiga
Iyada oo guud ahaanba dalkeena itoobiya si mug leh looga xusayo sanad guurada 4aad ee ka soo wareegtay maalintii la dhagax dhigay wabiga biyo xidheenka Abay ayaa waxaa xaflad si meeqaam sare ah loo soo agaasimay oo loogu dabaal dagayo sanadguurada 4aad ee Abay ay ka dhacday xarunta deegaanka ee Jigjiga.
Xafladan sanad guurada 4aad ee Abay oo ka dhacday hoolka shirarka ee SMCX ayaa waxaa ka soo qayb galay masuuliyiinta sare ee xukuumada DDSI, golaha capinetka DDSI, galaha wasiirada, shaqalaha dawlada, odayaasha, garaadada, qurba joogta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada.
Xafladan oo ahayd mid si aad u qurux badan loo soo agaasimay laguna soo bandhigayay heeso ka turjimaya ahmiyada uu Abay u leeyahay guud ahaanba dalkeena itoobiya ayaa waxaa ugu horayntii ka hadlay ku simaha madaxwaynaha DDSI ahna maareeyaha wakaalada dakhliga DDSI mudane Ahmed Maxamed Shugr.
Wuxuuna si qoto dheer uga hadlay ahmiyada uu leeyahay biyo xidheenka Abay guud ahaanba shacabwaynaha dalka itoobiya sida ay xukuumada iyo shacabka DDSI uga go’antahay dhamays tirkiisu iyo doorka ay ku leeyihiin hirgalintiisa.
Mayorka maamulka magaalada jijiga mudane Cabdirisaaq Saxane oo ka hadlay mudaanasabaasi ayaa ka warbixiyay faa’iidooyinka uu leeyahay dhamays tirka biyo xidheenka abay waxa kale oo uu tilmaamay in ay shacabka caasimada Jigjiga ganacsada iyo shaqaalaha dawladuba siwayn uga qayb qaateen hirgalinta biyo xidheenka Abay siina wadayaan dhamays tirkiisa.
Garaad Gulmiye Garaad Maxamuud Dool oo ka hadlay munaasabadaasi ayaa waxa uu si durugsan uga hadlay sida ay uga go’antahay shacabka deegaanka dhamays tirka wabiga biyo xidheenka Abay.
Wasiirada haweenka caruurta iyo dhalinyarada DDSI marwo Raxma Suldaan Maxamuud Haybe oo ka hadashay munaasabadaasi ayaa waxay tilmaantay doorka ay haweenka iyo dhalinyaradu ku yihiin hirgalinta dhamays tirka biyo xidheenka abay waxayna sheegtay in kaalintooda kaga aadan sii xoojin’doonaan ilaa dhamays tirkiisa.
Waxaana, intii ay socotay munaasabadaasi dhinaca socday iibsiga boandiga oo ay shaqaalaha dawlada ganacsadada masuuliyiinta iyo qaybaha kale duwan ee bulshaduba siwayn u iibsanayeen.
Isku soo wada duub oo xafladaasi loogu dabaal dagayay sanad guurada 4aad ee biyo xidheenka Abay oo halku dhig looga dhigay sidaanu u bilownay ayaan u dhamays tiraynaa ayaa jawi farxadeed ku soo gabagabowday.